ဒူဒူကြီး: Flow metering - SLVA spring loaded variable area flow meter
Flow metering - SLVA spring loaded variable area flow meter
variable area flow meter နောက်တမျိုးကတော့၊ spring loaded variable area flow meter ဖြစ် ပါတယ်။ spring ကို balancing force အနေနဲ့၊ အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် gravity ကို၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ဖို့ မလိုအပ်တော့ ပဲ၊ plane ပြင်ညီ၊ သို့မဟုတ် upside-down အထက်အောက်ပြောင်းပြန် လိုအပ်သလို၊ တတ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Fig. Spring loaded variable area flow meters
spring နဲ့ချိတ်ဆွဲထားတဲ့အတွက်၊ float ရဲ့ movement range ဟာ၊ အကန့်အသန့်ရှိသလို၊ spring ရဲ့ deformation ကိုလည်း၊ limitation အနေနဲ့ တွေ့ရပါတယ်။ fluid ဝင်လာတဲ့အခါ၊ float ဟာ upward direction နဲ့ရွှေ့လျားသလို၊ float နဲ့ tube အကြားမှ၊ pass area ဖြစ်တဲ့၊ annular area ရဲ့အရွယ် အစား ဟာလည်း၊ ကြီးမားသွားတဲ့အတွက်၊ differential pressure အနေနဲ့ constant နီးပါး ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Fixed area flow meter with orifice plate
orifice plate ကိုသုံးထားတဲ့၊ fixed area flow meter တွေမှာ၊ fluid စီးဝင်တဲ့အခါ၊ flow ဖြတ်သွားမယ့်၊ orifice plate ရဲ့ hole အရွယ်အစား တနည်းအားဖြင့် pass area ဟာ၊ constant ဖြစ်နေပါတယ်။ flow စီးဝင်တဲ့အခါ၊ ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ pressure difference မှတဆင့်၊ flow rate ကိုတွက်ယူပါတယ်။
Fig. Variable area flow meters
spring loaded variable area flow meters တွေမှာတော့၊ differential pressure ဟာ၊ constant နီးပါး ရှိနေပြီး၊ float movement မှ တဆင့် flow rate ကိုတွက်ယူပါတယ်။
Fig. Spring loaded variable area flow meter monitoring the position of the float
နောက်ပိုင်းမှာတော့ float နေရာမှာ flap တွေကိုထည့်သွင်းတတ်ဆင်လာသလို၊ ရိုးရိုး spring အစား၊ operation range ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ torsion springs တွေကိုပြောင်းလဲတတ်ဆင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအခါ chamber အရွယ်အစားဟာ၊ compact ဖြစ်သွားသလို၊ pressure နဲ့ temperature sensor တွေ ကို တတ်ဆင်ကာ၊ application ပေါါမူတည်ပြီး၊ steam tables, fluid density compensation အစရှိ တာတွေကို၊ computer unit မှာ programming အနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီး၊ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။
spring loaded flow meters တွေမှာ၊ turn-down ration အနေနဲ့ (25:1) မှ (40:1) အထိရနိုင်ပြီး၊ 25 Mtr/ Sec velocity ရှိတဲ့ applications တွေအထိ အသုံးပြုနိုင်သလို၊ accuracy အနေနဲ့ ±2% of actual value ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Fig. Typical installation ofaspring loaded variable area flow meter measuring steam flow
ဈေးနှုံးအရသက်သာပြီး၊ တတ်ဆင်တဲ့အခါ upstream မှာ pipe diameter ရဲ့ (၆) ဆအလျှားရှိတဲ့၊ straight length နဲ့ downstream မှာ pipe diameter ရဲ့ (၃) ဆအလျှားရှိတဲ့၊ straight length သာလိုအပ်တဲ့ အတွက်၊ short installation အနေနဲ့ တတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် chamber အရွယ်အစားအနေနဲ့ DN 100 သို့မဟုတ် (၄) လက်မအရွယ်အထိသာထုတ်လုပ်ကြပြီး၊ 30 Mtr/ Sec velocity အောက် applications တွေမှာသာအသုံးပြုနိုင်သလို၊ fluid ဟာ clean fluid ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
Fig. Spring Loaded Variable Area flow meter (SLVA) monitoring differential pressure
SLVA လို့ခေါါတဲ့ Spring Loaded Variable Area flow meters တွေကတဆင့်၊ differential pressure ကိုရယူပြီး၊ flow rate ကို၊ တွက်ယူ နိုင်ပါသေးတယ်။ spring loaded cone shaped float ကိုတတ်ဆင် အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ ပေါါပေါက်လာတဲ့ flow rate နဲ့ differential pressure တို့ရဲ့ linear relation အရ၊ flow rate ကိုတွက်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Typical installation ofaSVLA flow meter monitoring differential pressure
spring loaded cone shaped တတ်ဆင်ထားတဲ့၊ SLVA flow meters တွေရဲ့ turn-down ratio ဟာ၊ (100:1) အထိရှိပြီး၊ accuracy အနေနဲ့ ±1 % of actual value ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ chamber ရဲ့ အထူဟာလည်း 60 mm ခန့်သာရှိပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 18:14